Ukugxothwa | Law & More BV
Blog » Ukugxothwa
Oktobha 5, 2020
Ukugxothwa lelinye lawona manyathelo afikelela kude kumthetho wengqesho oneziphumo ezibi kumqeshwa. Kungenxa yoko le nto wena njengomqeshi, ngokungafaniyo nomqeshwa, ungenakuyibiza nje ngokuyeka. Ngaba uzimisele ukugxotha umqeshwa wakho? Kwimeko apho, kuya kufuneka ukhumbule iimeko ezithile zokugxothwa ngokusemthethweni. Okokuqala, kubalulekile ukufumanisa ukuba ingaba umqeshwa oceba ukumgxotha ukwimeko ekhethekileyo na. Aba basebenzi bayonwaba ukugxothwa. Unokufunda malunga neziphumo zakho njengomqeshi kwindawo yethu: Ukuchithwa.site.
Kuya kufuneka ukwenze ukugxothwa komqeshwa ngesizathu esinye kwezi zilandelayo:
ukugxothwa kwezoqoqosho ukuba umsebenzi omnye okanye emininzi iya kulahleka;
ukungakwazi ukusebenza ixesha elide ukuba umqeshwa wakho ebegula okanye engakwazi kwenza umsebenzi ngokuqhubekayo kangangeminyaka emibini okanye nangaphezulu;
ukungasebenzi kakuhle xa unokubonisa ukhuthaze ukuba umqeshwa wakho akafanelekanga ekwenzeni imisebenzi yakhe;
Izenzo ezinetyala okanye ukushiya xa umqeshwa wakho eziphatha (ngokungathí sina) enetyala emsebenzini;
uphazamise ubudlelwane kwezengqesho ukubuyiswa kobudlelwane bengqesho akunakwenzeka kwaye ukugxothwa akunakuphepheka;
ukungabikho rhoqo ukuba umqeshwa wakho akafiki rhoqo emsebenzini, uyagula okanye ukhubazekile, kwaye oku kuneziphumo ezingamkelekanga kwimisebenzi yakho yeshishini;
ukugxothwa ngenxa yentsalela ukuba iimeko zinje ukuba akukho ngqiqweni kuwe njengomqeshi ukuvumela ikhontrakthi nomqeshwa wakho ukuba iqhubeke;
ukwala ukusebenza ngenxa yesazela xa uhlale etafileni kunye nomqeshwa wakho kwaye nifikile kwisigqibo sokuba umsebenzi awunakwenziwa ngendlela etshintshiweyo kwaye ukwabelwa kwakhona ayongombandela.
Ukusukela nge-1 Januwari 2020, umthetho unendawo eyongezelelweyo yokugxothwa, eyile umhlaba owongezelekayo. Oku kuthetha ukuba nawe njengomqeshi ungamgxotha umqeshwa wakho ukuba iimeko ezivela kwizizathu ezininzi zokugxothwa zikunika isizathu esaneleyo sokwenza oko. Nangona kunjalo, njengomqeshi, akufuneki usekele ukhetho lwakho lokugxothwa kuphela kwezi zizathu zomthetho zikhankanyiweyo ngasentla, kodwa ungqinisise ubukho bayo. Ukhetho lomhlaba othile wokugxothwa kukwaquka inkqubo ethile yokugxothwa.
Ngaba ukhetha ukugxothwa ngenxa yezizathu zeshishini okanye ngenxa yokungakwazi ukusebenza (ngaphezulu kweminyaka emi-2)? Kwimeko apho, wena njengomqeshi kufuneka ufake isicelo semvume yokugxothwa kwi-UWV. Ukulungela imvume enjalo, kufuneka unike izizathu ezifanelekileyo zokugxothwa komqeshwa wakho. Umqeshwa wakho uya kuba nethuba lokuzithethelela koku. I-UWV iya kuthatha isigqibo sokuba umqeshwa angagxothwa okanye hayi. Ukuba i-UWV inika imvume yokugxothwa kwaye umsebenzi wakho akavumi, umqeshwa wakho angangenisa uxwebhu lwezikhalazo kwinkundla yamacandelwana. Ukuba owokugqibela ufumanisa ukuba umqeshwa unelungelo, iNkundla yeSithili ingathatha isigqibo sokuyibuyisela ikhontrakthi yengqesho okanye ukunikezela umvuzo wakho.
Ngaba uza ku ukugxotha ngenxa yezizathu ezizezakho? Ke indlela yenkundla yenqila kufuneka ilandelwe. Le asiyondlela elula. Njengomqeshi, kuya kufuneka ukuba wakhe ifayile ebanzi kwisiseko esinokubonisa ukuba ukugxothwa kuphela kwendlela. Kungoko kuphela apho inkundla iya kukunika imvume yesicelo sokuphelisa ikhontrakthi yengqesho kunye nomqeshwa wakho. Ngaba uyasingenisa isicelo sokucinywa okunje? Ke umqeshwa wakho ukhululekile ukuzithethelela koku kwaye achaze ukuba kutheni engavumelani nokugxothwa okanye kutheni umqeshwa wakho ekholelwa ekubeni kufanelekile ukuba afumane umvuzo wokuyeka emsebenzini. Kuphela kuxa zonke iimfuno zomthetho zifezekisiwe, iNkundla yesiThili iya kuqhubeka nokusombulula ikhontrakthi yengqesho.
Nangona kunjalo, kusetyenziswa indlela ye- ukugxothwa kwemvume yomtshato kunye, ungakuphepha ukuya kwi-UWV nakwinkqubo phambi kwenkundla yesithili kwaye ugcine iindleko. Kwimeko apho, kuya kufuneka ufikelele kwizivumelwano ezifanelekileyo nomqeshwa wakho ngothethathethwano. Xa wenze izivumelwano ezicacileyo nomqeshwa wakho, izivumelwano ezifanelekileyo ziya kuthi ke zirekhodwe kwisivumelwano sentlawulo. Umzekelo, umzekelo, unokuqulatha ukuba yeyiphi intlawulo eza kuqhawulwa ngumqeshwa wakho nokuba ingaba igatya elingakhuphisani liyasebenza na. Kubalulekile ukuba ezi zivumelwano zibhalwe ngokusemthethweni ngokusemthethweni ephepheni. Kungenxa yoko le nto kububulumko ukuba izivumelwano zenziwe zihlolwe ligqwetha eliyincutshe. Ngesiqhelo, umqeshwa wakho uneentsuku ezili-14 emva kokuba etyikitye ukubuyela kwizivumelwano ezenziwe.
Amanqaku okuqwalaselwa kwimeko yokugxothwa
Ngaba uthathe isigqibo sokugxotha umqeshwa wakho? Ke kukwabubulumko ukuba unike ingqalelo kwezi ngongoma zilandelayo:
Imali yenguqu. Le fomu ibhekisa kubuncinci bembuyekezo esemthethweni ekufuneka igqitywe ngokomgaqo osisigxina omtyala umqeshwa wakho osisigxina okanye oguqukayo xa uqhubeka nokugxothwa. Ngokwaziswa kwe-WAB, ukongezwa kwale ntlawulo yenguqu kwenzeka kusuku lokuqala lokusebenza komqeshwa wakho kunye nabasebenzi abafowunelwa okanye abasebenzi ngexesha lokulingwa banelungelo lokuhlawulwa ngotshintsho. Nangona kunjalo, kwelinye icala, ukonyuka kwemali eyongezelelweyo yentlawulo yabasebenzi bakho abanesivumelwano sengqesho esingaphezulu kweminyaka elishumi iya kucinywa. Ngamanye amagama, iba “ngexabiso eliphantsi” kuwe njengomqeshi, ngamanye amagama kube lula ukugxotha umqeshwa ngekhontrakthi yengqesho yexesha elide.
Imbuyekezo efanelekileyo. Ukongeza kwintlawulo yotshintsho, njengomqeshwa, usenakho ukuhlawulwa imali eyongezelelweyo yokuqhawulwa komsebenzi wakho. Oku kuya kuba njalo ngakumbi ukuba kukho isenzo esibi kakhulu ecaleni kwakho. Kwimeko yesi senzo, umzekelo, ukugxothwa komqeshwa ngaphandle kwesizathu esivakalayo sokugxothwa, ubukho bokusoyikisa okanye ucalucalulo. Nangona imbuyekezo eyiyo ayisiyonto ingahambelaniyo, ichaphazela kuphela iimeko ezizodwa apho inkundla iya kuyinika le mbuyekezo intle umqeshwa. Ukuba inkundla iyanikezela ngembuyekezo efanelekileyo yomqeshwa wakho, iya kuthi ichonge isixa-mali ngokwemeko leyo.
Ibhili yokugqibela. Ekupheleni kokuqeshwa kwakhe, umqeshwa wakho unelungelo lokuhlawula iintsuku zeholide eziqokelelweyo. Zingaphi iintsuku zeholide umqeshwa wakho anelungelo kuzo, kuxhomekeke kwinto ekuvunyelwene ngayo kwisivumelwano sengqesho kunye nakwi-CLA. Iiholide ezisemthethweni apho umqeshwa wakho anelungelo kuyo nayiphi na imeko zinokuphindaphindwa kane kwinani leentsuku zokusebenza ngeveki. Emazantsi omgca, kuya kufuneka uhlawule umqeshwa kuphela kwiintsuku zeholide eziqokelelweyo, kodwa engekathathwa. Ukuba umqeshwa wakho unelungelo lokufumana inyanga yeshumi elinesithathu okanye ibhonasi, la manqaku kufuneka kuxoxwe ngawo kwingxelo yokugqibela kwaye ahlawulwe nguwe.
Ngaba ungumqeshi ozimisele ukugxotha umqeshwa wakho? Emva koko qhagamshelana Law & More. at Law & More Siyaqonda ukuba iinkqubo zokugxothwa azikho nzima kuphela kodwa zinokuba neziphumo ezibi kuwe njengomqeshi. Kungenxa yoko le nto sithatha indlela yobuqu kwaye ngokubambisana sinokuvavanya imeko yakho kunye nezinto ezinokwenzeka. Ngesiseko solu hlalutyo, sinokukucebisa ngamanyathelo alandelayo alandelayo. Siyavuya ukukunika iingcebiso noncedo ngexesha lenkqubo yokugxothwa. Ngaba unemibuzo malunga neenkonzo zethu okanye malunga nokugxothwa? Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nokugxothwa kunye neenkonzo zethu kwindawo yethu: Ukuchithwa.site.
Post edlulileyo Ukonakala kwebango: Yintoni ekufuneka uyazi?
Post Next Yintoni irekhodi lolwaphulo-mthetho?
FUNA ULWAZI OLUTHELEKILEYO ??
Amagqwetha ethu akwinkonzo yakho.
Umnxeba: +31 40 369 06 80
okanye ushiye iinkcukacha zakho apha ngezantsi